ICuracao yazisa uMlawuli Ophetheyo / i-CEO yeSiseko soPhuhliso lwezoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » ICuracao yazisa uMlawuli Ophetheyo / i-CEO yeSiseko soPhuhliso lwezoKhenketho
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeCuracao Breaking News • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Oktobha 12, 2018
ICuracao Tourism Development Foundation (i-CTDF) ibhengeze ukuqeshwa kukaPaul Pennicook njengoMlawuli oPhetheyo / i-CEO, ngokukhawuleza.
Umfundi ophumelele iYunivesithi yaseCornel, onesidanga kuLawulo lweehotele kwaye esazi kakuhle isiNgesi neSpanish, uPennicook uzisa ubutyebi bamava kumzi-mveliso wokubuka iindwendwe ephethe izikhundla eziphezulu kwizikhundla zikarhulumente nakumashishini abucala eMntla Melika, eYurophu naseCaribbean.
Ngokuzalwa kukaJamaican, uPennicook unolwazi olwahlukileyo lokuba usebenze kabini njengoMlawuli wezoKhenketho eJamaica kwaye inguye kuphela umntu oye wasebenza kwizikhundla zolawulo oluphezulu kunye neendawo zokubonelela ezibandakanya zonke iJamaica- iiSuperClub ezibandakanya iBreezes, iHedonism II kunye neGrand Lido ngaphakathi. iipotifoliyo zabo, kunye neendawo ekuhlalwa kuzo zeembadada njengeSekela Mongameli oLawulayo kwicandelo lentengiso leembadada, iiholide ezizodwa. UPennicook ukwasebenza njengo-Mongameli / i-CEO yeeNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide ii-Couples Resorts kwaye wayengu-Sekela Mongameli oMkhulu we-Air Jamaica, inqwelo moya yenqwelomoya eJamaica enoxanduva lokuthengisa kunye nemisebenzi yokuthengisa.
Phantsi kwexesha lokuqala likaPennicook njengoMlawuli wezoKhenketho waseJamaica, wayejongana nomsebenzi wokuhlengahlengisa ophumeleleyo okhokelele kwintengiso ejolise ngakumbi kwiBhodi yezoKhenketho kwaye unikwa imbeko yokuba enze izicwangciso-nkqubo ezakhokelela ekwandeni kweerekhodi kwabo bafikayo kuzo zombini izihlandlo azisebenzeleyo.
Kwingxelo emfutshane, uPennicook uvakalise umbulelo ngokuthembela kweBhodi yeCuracao yabakhenkethi kuye ngokuqeshwa kwakhe njengoMlawuli oPhetheyo, “Ndiyayihlonipha imbali yakudala yenkulungwane yoMbutho weCuracao woKhuthazo loTyelelo lwangaphandle kwaye Ndiyayiqonda imitsi esele yenziwe kule minyaka idlulileyo yokunyusa ukufika kwezokhenketho eCuracao licandelo likarhulumente nelabucala. Kuyakuba lilungelo lam ukusebenza namaqabane oshishino ukuqhubeka nokwakhela kwezo mpumelelo ”utshilo.
“Kuyachulumancisa ukuba yinxalenye yeli qela lezokhenketho linamandla kwaye ndiceba ukubandakanya oogxa bam kwiCuracao Tourist Board (CTB), iCuracao Hospitality and Tourism Association (CHATA), iCuracao Ports Authority (CPA), Airport Igunya kunye nezinye iinkokheli zecandelo lezokhenketho, ukuva iingcinga zabo ngobume beshishini lokhenketho laseCuracao kunye nokwabelana ngezimvo zam. Ngokusebenzisana sizakuqinisekisa ukuba yeyiphi indlela yokwandisa abafikayo kunye nenkcitho yabatyeleli ”uqhubeke uPennicook.
“Ndiyazi ngamava am ukuba onke amazwe axhomekeke kwezokhenketho anemiceli mngeni eyahlukileyo. ECuracao umzekelo, ifuthe lemeko yemicimbi eVenezuela ekufikeni kweendwendwe iyaxhalabisa. Olunye uluvo kukuba iCTB ikhawulezise ukubandakanyeka kwiimarike zethu eziphambili ngelixa ifuna amathuba kwiimarike ezintsha nezisakhulayo ukumelana nokusilela kokufika okuvela eVenezuela. Injongo yam kukuqinisekisa ukuba iCuracao ibekwe kakuhle ukuze izuze amathuba okukhula. Uluvo olucingisisiweyo olwenzile ukwenza uhlobo olutsha lweCuracao kwihlabathi liphela, Zive ngokwakho 'luwenza lula umsebenzi wam kwaye kuyandivuyisa ukuba yinxalenye yokukhutshwa kwaye siphumelele ”uqukumbele watsho.
Utshatile kwaye ungutata wonyana, uPennicook ngumamkeli we-Order of Distinction (OD) evela kuRhulumente waseJamaican ngegalelo eligqwesileyo nelizinikeleyo kwiCandelo lezoKhenketho.